ZrCoin စျေး - အွန်လိုင်း ZRC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZrCoin (ZRC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZrCoin (ZRC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZrCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 402 231.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZrCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZrCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZrCoinZRC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.773ZrCoinZRC သို့ ယူရိုEUR€0.658ZrCoinZRC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.591ZrCoinZRC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.707ZrCoinZRC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.95ZrCoinZRC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.9ZrCoinZRC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč17.23ZrCoinZRC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.89ZrCoinZRC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.03ZrCoinZRC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.08ZrCoinZRC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$17.33ZrCoinZRC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.99ZrCoinZRC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.24ZrCoinZRC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹57.8ZrCoinZRC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.130.5ZrCoinZRC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.06ZrCoinZRC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.17ZrCoinZRC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿24.04ZrCoinZRC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.37ZrCoinZRC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥81.96ZrCoinZRC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩914.85ZrCoinZRC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦299.38ZrCoinZRC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽56.71ZrCoinZRC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴21.37
ZrCoinZRC သို့ BitcoinBTC0.00007 ZrCoinZRC သို့ EthereumETH0.00195 ZrCoinZRC သို့ LitecoinLTC0.0132 ZrCoinZRC သို့ DigitalCashDASH0.00804 ZrCoinZRC သို့ MoneroXMR0.00818 ZrCoinZRC သို့ NxtNXT57.58 ZrCoinZRC သို့ Ethereum ClassicETC0.109 ZrCoinZRC သို့ DogecoinDOGE218.62 ZrCoinZRC သို့ ZCashZEC0.00871 ZrCoinZRC သို့ BitsharesBTS28.17 ZrCoinZRC သို့ DigiByteDGB24.79 ZrCoinZRC သို့ RippleXRP2.55 ZrCoinZRC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0259 ZrCoinZRC သို့ PeerCoinPPC2.5 ZrCoinZRC သို့ CraigsCoinCRAIG342.52 ZrCoinZRC သို့ BitstakeXBS32.06 ZrCoinZRC သို့ PayCoinXPY13.12 ZrCoinZRC သို့ ProsperCoinPRC94.3 ZrCoinZRC သို့ YbCoinYBC0.000404 ZrCoinZRC သို့ DarkKushDANK241.04 ZrCoinZRC သို့ GiveCoinGIVE1626.99 ZrCoinZRC သို့ KoboCoinKOBO171.26 ZrCoinZRC သို့ DarkTokenDT0.712 ZrCoinZRC သို့ CETUS CoinCETI2169.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:10:02 +0000.